क्रिकेट खेलाडीहरु नेताको घरमा ढुक्न जान चैँ किन पर्ने? हिजो राति फर्किए, बिहानै पुगे खुमलटार – MySansar
क्रिकेट खेलाडीहरुले इतिहास बनाए। वन डे इन्टरनेसनल र टि २० इन्टरनेसनल सिरिज खेल्न युएई गएको टिम नेपाल दुवै सिरिज २-१ ले जित्न सफल भयो। दुवैमा अर्धशतक बनाउने कम उमेरको खेलाडीको रेकर्ड पनि नेपालीहरुले नै राखे।
देशमा क्रिकेट संघ निलम्बित छ। नियमित खेलको वातावरण छैन। खेलाडीहरुलाई सुविधा छैन। त्यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरुले देशको नाम राखेका छन्। देशवासीलाई खुसी हुने मौका दिएका छन्। तर त्यस्ता खेलाडीहरु चाहिँ किन बिहान बिहानै नेताहरुको घरमा ढुक्न जानु पर्ने होला?
क्रिकेट खेलाडीहरु युएईबाट हिजो राति फर्किएका थिए। आज बिहानै उनीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को घरमा पुगेछन्। यो चाहिँ अलि चित्त बुझेन। क्रिकेट खेलाडीहरुले आफ्नो महत्त्व आफै नबुझे झैँ लाग्यो। विश्वमा अरु कुन देश छ होला जहाँका क्रिकेट खेलाडीहरु हुल बाँधेर कुनै नेताको घरमा कुनै प्रतियोगिता जितेपछि भेट्न जान्छन्?
प्रधानमन्त्री निवास वा राष्ट्रपति निवासमा जानु भनेको बेग्लै कुरा हो। देशका कार्यकारी प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख हुन् उनीहरु। तर सत्तारुढ दलका एक नेताको घरमा त्यसरी बिहान बिहानै पुगेर के फाइदा? क्रिकेट ग्राउन्डमा बरु नेता बोलाएर कार्यक्रम गरेको भए पनि एउटा कुरा !
कसले उचालेछन् खेलाडीहरुलाई लौ है भेट्न जानु पर्छ भनी। अनि बिहान बिहान टोली नै प्रचण्डको खुमलटार निवास पुगे।
प्रचण्डको सचिवालयले पनि समाचार बनाएर पठाए मिडियालाई। समाचारमा अध्यक्षलाई भेट्न नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरु खुमलटार पुग्नुभएको थियो भनेर समेत लेखिएको थियो। यस्तो थियो समाचार
ललितपुर, २२ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्वमा नेपालको सम्मान र इज्जत बढाउन सफल भएको भन्दै बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ ।
ऐतिहासिक विजय हासिल गरेर फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले आज खुमलटारस्थित निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रिय टीमका खेलाडीलाई बधाई दिनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको ऐतिहासिक जीतले खुशी भएको बताउनुभयो ।
देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको बेला राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न क्रिकेट खेलमा भएको प्रगतिले ठूलो भुमिका खेलेको उहाँको भनाई थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यले खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको र चितवनमा बन्ने स्टेडियमबाट क्रिकेट खेलको विकासमा झन योगदान पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो तर्फबाट यो क्षेत्रको विकास र खेलाडिको मनोबल उच्च राख्न सक्दो सहयोग गर्ने समेत अध्यक्षले बताउनुभयो । अध्यक्षलाई भेट्न नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरु खुमलटार पुग्नुभएको थियो ।